Tag Archives: mustaqbalka
Dom » Gelitaannada lagu calaamadeeyay "mustaqbalka"
Awoowgay, Adolf iyo gaadhigii. Safarka waqtiga weligiis suurtagal ma noqon doonaa?
31 Janaayo 2021
fiisikiska, mustaqbalka, xisaabta, sayniska, safarka waqtiga
Bal ka fikir in aan ahay dambiile nacayb ah oo aan dilo awowgay. Si kastaba ha noqotee, maahan halkan iyo hadda, laakiin waqtiyadii hore - waxaan dib ugu laaban doonaa waqtigeyga waxaanan awoowe u noqon doonaa yaraanteydii, xitaa ka hor inta uusan noolaan ...
Khariiddada ayaa soo jeedda si qof u seexan karo
mustaqbalka, Gadzhiyev, cloning, sayniska
Markay qaylo-dhaanta ugu horreysa soo garaacdo 07:30, waxaan toos u daaraa hawsha "suuxdinta" oo aan ku beddelaa 5 daqiiqo oo kale dhinaca kale. Kadib waxaan ku ciyaaraa roulette nolosha, maxaa yeelay marna ma ogaan kartid haddii ay dhab ahaantii ...